Akpata oyi wụrụ m mgbe m lere akaụntụ ochie anyị nke Feedburner iji hụ na a ka nwere ndị ọrụ 9,000 + ndị na-elele ọdịnaya anyị site na ndepụta anyị kwa ụbọchị… wow! Na mgbe m malitere ileba anya na saịtị ndị ọzọ, ha nwere ndị na - agụ 50,000 + na ụfọdụ blọọgụ. Lee ihe ole na ole anyị meworo iji bulie ndepụta RSS anyị na ndị nwụrụ anwụ site na iji WordPress.
Anyị dọrọ Feedburner ma tinye ya Feedpress na saịtị anyị. Ọ bụ ikpo okwu na-egosi nchịkọta nri zuru ezu na ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ dị ka ike CNAME ndepụta gị ka ị ghara ịdabere na nke ochie ahụ onye na -eri nri URL. Yabụ, enwere m subdomain https://feed.martech.zone setịpụrụ maka ndepụta anyị!
WordPress Nkwụnye - Ọ bụrụ n’ị nọ na WordPress, ha na-enye ngwa mgbakwunye ka ihe dị mfe!
Mara: Agụnyere m URL mgbakwunye maka Feedpress - ma kwado usoro ikpo okwu!
Tags: ozorss xmlgbanwee site na feedburner gaa feedpressndepụtaakara ngosi nrionye na -eri nrinriebe njuputankụnye eji isi mee maka nriesi tinye ikike nwebisiinka na ndepụta gịesi ebipụta na-elekọta mmadụjson nrirss nriakara ngosi rssrss na-elekọta mmadụrss xmlsb rss feed tinyere mgbakwunyeWordPresswordpress plugin